iPhone 7 Features iyo Details: 10 Waxyaabaha Waxaan doonayaa in aan arko in iPhone 7 / iPhone 6s
iPhone 6s (Plus) Features iyo Details: 10 Waxyaabaha Waxaan doonayaa in aan arko in iPhone 6s (Plus)
Sida maalin kasta gudubtaa, waxaan nahay dhaw in la sii daayo iman kara iPhone 6s (Plus). Sidoo kale, maalin walba waxaan heli news iyo aad u badan oo ku saabsan sifooyinka qalabka ku yeelan karto. Oo gooni loo sooco oo dadka isticmaala qalabka macruufka yihiin kamidka sugaya wararka iyo la sii daayo jiilka xiga ee casriga ah. Dhanka kale, kuwaas oo isticmaala aad ayaa helay hab si aad u weyddiisato, la xiriir Apple oo uu kala hadlo ee forums qaababka cusub oo suurto ah qalabka. Halkan waxa ku jira 10 wax users doonayaan 6s cusub iPhone (Plus) si ay leeyihiin.
1. dheer Life Battery
Apple ayaa horey u balan qaaday in qalabka la jaan qaada macruufka 9 heli doonaan nolol ka wanaagsan iyo batari dheer. Laakiin, waxa isticmaala sidoo kale doonayaa waa batari macno weyn ee 6s iPhone (Plus). iPhone 6 iyo iPhone 6 daray hore u yihiin aad u dhuuban. Annagu ma u baahan tahay qalab slimmer. Halkii, dadku doonayaan Apple si ay u isticmaalaan in meel bannaan oo lacag la'aan ah oo ay soo saaraan bateriga ka weyn in uu socon doono muddo dheer.
2. oogidda Wireless
Aan soo shirtagi batteriga waxoogaa ka badan. Maalmahan qalabka macruufka yihiin si horumarsan. Sidaas, sababta aan ku dhiirigelinayaan in uu iyaga xukun wireless bixin lahaa? Users kaas oo ay leeyihiin aaladaha macruufka badan si joogto ah isagoo qalad ku dhawaad ​​la fiilooyinka badan oo gelanayo. Waxay noqon lahayd si diirsaday haddii kaliya ay hoos u kartaa telefoonka ku pad xukun ah oo ha samayn shuqulkii oo dhan,. Apple u suurtagashay in ay ka mid xukun wireless ee Apple Watch, si ay dadka aaminsan yihiin waxaa suurto gal ah la iPhone 6s kale (Plus).
3. Battery la badalayo
users macruufka u muuqdaan in ay leedahay cabashooyin badan marka ay timaado baytariyada iPhone. dadka isticmaala iPhone waa badan tahay ka masayro Android users, tan iyo markii ay dhab ahaantii leeyihiin baytariyada badeli. Maxaad iPhone ah u baahan tahay in batteriga badeli? Waa hagaag, sida iska cad, waxa ay ka dhigi lahaa fududeyn doonaa beddelida batteriga iyo wareegga bedelka iPhone ee sii dheerayn doono.
4. Cadaadis xasaasi Screen / Force Touch Screen
5. safayr Glass
Hadda, dhalooyinka iyo safayr waa casriyayn ah oo xagjir ah. Waa in aad maqasheen safayr Glass iyo bakhtiyo Glass labadaba, sax? Waa hagaag, bakhtiyo Glass waa ka sii adkaysta marka ay timaado tagtey telefoonka, laakiin safayr waa xoq u adkaysta more badan ee hore loo isticmaali Corning ee bakhtiyo Glass. Apple saaray safayr Glass ku camera iyo Apple Watch, oo hadda dadku rabaan in ay sidoo kale waxa ay u arkaan soo bandhigay ah. Dabcan, dadka ayaa ku kharashka ku hay si ay u soo jeedinaya in galaas ma u leeyihiin in ay galaaska safayr daahir. Screen galaas waxa ku jiri kara lakabka ah ee laminate safayr on top. Taasi waxay hagaajin lahaa-caabin ah la xoqo iyo sidoo kale kharash yar, sidoo kale.
6. si dhakhso ah Touch ID
Qof walba raacdo in ID Touch wax yaabahan la yaab leh, oo si fiican ugu shaqeeyeen aad. Laakiin, qof walba ku qanacsan yahay mid wax kale - ID Touch ay noqon kartaa in yar oo dhakhso. Geedi socodka noqon kartaa daalin haddii aad samaynayso in ka badan hal ama laba farood waqti isku mid ah. Sidoo kale, waxa ay noqon doontaa wax cajiib ah haddii Apple yaraadaan laga yaabaa markii ugu qaadataa ID Touch in lagu furo qalab aad, awood u iibsi ee dukaanka App, ama bixiso iibsiga via Apple Pay. Hadda, in ka dhigi lahaa iPhone 6s (Plus) gabi ahaanba yaab.
7. Camera soo hagaagaya iyo Features Camera More
iPhone kaamaro fiican, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah muuqaalada macruufka cusub users doonayaan ka version soo socda kamarada iSight. Qof walba waxa uu doonayaa wax waa tayada image wanaagsanaaday. No, waxaan aan la weydiisanaya megapixels dheeraad ah. Waxaan ka codsanaynaa, waayo, waxyaalaha fudud, sida xasilinta image indhaha ku iPhone 6s. Waxa kale oo ay noqon lahayd mid cajiib ah, haddii users duubi kartaa in 4K, ama aad leedahay fursado xitaa gaabis ah u duubo mooshin gaabis ah. Sidoo kale, waxa uu noqon lahaa qabow haddii gashto camera fadhiistay radi jirka telefoonka, tan, waxaad ogaan, qof kasta oo aan isticmaalaa kiis.
The iPhone 6 camera waa weyn yahay, camera iPhone 6 Plus waa mid cajiib ah, laakiin waxa ay durbaba waxaa jira qaar ka mid ah wararka xanta ah waxa iPhone 6s (Plus) camera uu noqon karo sida. Sida laga soo xigtay: Wararkii ugu dambeeyay, John Gruber, oo ah falanqeeye la raadraaca diiwaanka heer sare ah, ayaa soo jeediyay samaynta boodi ugu weyn camera ee taariikhda iPhone, la iPhone soo socda. Sida laga soo xigtay Gruber, iPhone 6s (Plus) waa inay qabaan hab laba-gashto cusub oo qabsan doonaan "tayada sawirka-DSLR." Bal qiyaas isagoo xoogga camera DSLR ah ee aad taleefan.
8. Screen yar
Waxaad na ha rumaysanina marka aan idinku leeyahay, laakiin waa run. Dad badan ayaa jeclaan lahaa iPhone soo socda si ay leeyihiin shaashad yar. Qof kasta oo cabasho ka size yar ee iPhone 5, marka la barbar dhigo tirada shaashadda aaladaha Android. Laakiin, markii iPhone 6 ahaa dad badan, gaar ahaan kuwa la gacmo yar-yar la sii daayay, ayaa helay oxaha.
Sida muuqata, waxaa jira qaar ka mid ah warar sheegaya in 6s iPhone (Plus) ayaa laga yaabaa in shaashada 4-inji ah. Si aad wax badan sax noqon, shaashadda u dhaxaysaa laga yaabaa inuu ka soo 4.7 inch si 5.5 inch, si caashaqi jiray phone waaweyn ma u leeyihiin in ay ka walwalaan.
9. 32GB Kaydinta
Aan xuso Mr. John Gruber waqti dheeraad ah oo ka mid ah. Marka iPhone 6 ka soo baxay, oo wuxuu lahaa hal su'aal oo kaliya, halka ay ka model 32GB ah?
Sida muuqata, wax badan oo ka mid ah dadka ku raacsan Gruber. Iyada oo dhan updates, hayaan, sawirada iyo video, 16 GB kuma filna. Apple, waxaan u baahan tahay meel dheeraad ah oo ku iPhone 6s (Plus)!
10. saari Kaydinta
Halkan waxaan mar kale yihiin la meel kaydinta. Ok, sidaas tan iyo markii 16 GB kuma filna iyo Apple malaha ma abuuri karaan 32 GB iPhone 6s (Plus), ka dibna dadka ugu yaraan doonayaan awood u leh inay u isticmaalaan kaydinta saari karo. Inkastoo, tani lagama yaabo, ilaa hadda waxaa suurtogal.
Kuwaasu waxay ahaayeen 10 sifooyinka dadka ugu saabsan daryeel. Adiguna see tahay? Waa kuwee feature aad u danaynayaa ugu? Ma waxaa jira muujinta kale in aad daryeesho, laakiin ma aanu sheegin?
> Resource > iPhone > 6s iPhone (Plus) Features iyo Details: 10 Waxyaabaha Waxaan doonayaa in aan arko in iPhone 6s (Plus